Sawirro: JANAN oo meel fagaare ah lagu arkay iyo war kasoo baxay Jubaland | Caasimada Online
Home Warar Sawirro: JANAN oo meel fagaare ah lagu arkay iyo war kasoo baxay...
Sawirro: JANAN oo meel fagaare ah lagu arkay iyo war kasoo baxay Jubaland
Beled Xaawo (Caasimada Online) – Maamulka Jubaland ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulkaas Maxamuud Sayid Aadan, iyo wasiirka amniga Cabdirashiid Janan ay maanta booqasho ku tageen degmada Beled Xaawo.
Qoraal kooban oo lagu baahiyey warbaahinta Jublanad ayaa lagu yiri “Madaxweyne ku-xigeenka 1-aad ee Jubaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada Jubaland ayaa booqday taliska ciidamada daraawiishta Jubaland ee degmada Beladxaawo, waxaana wasiirada ka mid ah wasiirka amniga Jubaland Cabdiraahiid Janan.”
Qoraalkan laguma bixin faah-faahin intaas ka badan, hase yeeshee waxaa la raaciyey sawirrada booqashada oo ay ka muuqdaan Maxamuud Sayid Aadan, Janan iyo xubno kale.
Caasimada Online si rasmi ah uma xaqiijin karto in goobta ay ku sugan yihiin Janan iyo Maxamuud Sayid Aadan tahay Beled-Xaawo, waxaana jira warar sheegaya inay tahay duleedka Beled-Xaawo ee dhanka xuduudda Kenya.
Muuqaalkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee muujinaya Cabdirashiid Janan oo meel fagaare ah taagan, tan iyo markii ay xiratay dowladda Soomaaliya 31-kii August 2019, ka hor inta aanu baxsan 28-kii Janaayo 2020.
Arrintan ayaa imaneysa malamo un kadib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ciidamadeeda ay qabsadeen degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo, taasi oo dhalisay in Jubaland ay shaaciso in “dagaal lagu soo qaaday.”